China biodegradable tableware bagasse pulp chikafu chemidziyo bvisa bhokisi fekitori nevatengesi | CHOKWADI PAPA
Biodegradable tableware bagasse pulp chikafu mudziyo bvisa bhokisi
Zvakatipoteredza zvine hushamwari, compostable (90days)
Firiji yakachengeteka, hovhoni uye microwave yakachengeteka
Kudzivirira kwemvura, kuramba kwemafuta. anti-kunofambira mberi
Batsira kune yakasvibira hupenyu, iine mhando yepamusoro zvigadzirwa
Ruzivo ruzivo: Chii chinonzi compostable?
Zvinoenderana neASTM (American Society for Testing and Materials) zviyero. zvinogadzirwa zvinogoneka zvinofanirwa kupaza kuita kabhoni dhayokisaidhi, mvura uye biomass. Havafanirwe kuburitsa chero chepfu panguva yekugadzira manyowa uye vanofanirwa kutsigira hupenyu hwemuti. Iyo yakasvibira kubva pakutanga kusvika pakupedzisira.
Yedu yakaumbwa pulp zvigadzirwa zvese zviri pamba & maindasitiri manyowa anojekeswa neBPI (US), TUV Austria (EU) uye ABA (Australia / New Zealand). Iyo yakaderera kabhoni kuita kwepurp kurongedza ndeyakatipoteredza ine hushamwari.
Tarisa pane zvakatipoteredza zvine hushamwari package
BAKERY & COFFEE CHAIM
Bvisa UYE KUDZIVISA
KUMUSORO & LOW TEMP kuramba
ZVINOGONESESA ZVINOGONESESA ZVINOKOSHA
Zvakatipoteredza zvine hushamwari, zvinodzikisira mumazuva makumi mapfumbamwe
CHOKWADI PAPER inopa akasiyana siyana enharaunda ane hunyanzvi kurongedza mhinduro neakanakisa sevhisi uye zvemhando yepamusoro zvigadzirwa
TORA- KUDZIVA ZVIMAKOMBORERO DZAKATEVEDZANA
CHITSAUKO CHIDZIDZO-Pulp wonton midziyo
Midziyo miviri iyi yewonton inogona kushandiswa kubata zvimiro zvakasiyana zvewonton nemadhimoni. Iyo yekugadzira kamuri dhizaini yakakodzera kune akasiyana wonton maumbirwo. Iyo iyo concave muvharo inogona fx chikafu chiri mumudziyo uye chengetedze kubva mukufamba kuitira kuchengetedza yakakwana chikafu mharidzo.
HOT Tengesa Chigadzirwa
Hinge mudziyo renji-Kupa hwakawanda hwokubvisa makontena opikisi ane matanhatu matanhatu. Inovandudza "butterfly kukiya" dhizaini iri nyore kubata & kuenda, uye iko kuita kwakachengetedzwa kwekuchengetedzeka kwekufambisa, iyo inosangana zvakakwana zvido zvechikafu chekuenda nemisika yekudya yakapihwa.
TORA- kure BOWL DZAKATEVEDZANA
NEW CHIDZIDZO -Oval mbiya: yakanaka yekutora
Iri denderedzwa rine chimiro chakakora kune vatengesi vechikafu uye vanopa chikafu vanoshandira sarudzo dzekudya-senge masodhu, pasita, makatari, burritos, masaladi. Masayizi maviri (620ml & 770ml) anowanikwa pane zvaunoda. Iyo inonamira zvakakwana mune yakajairwa bvisa-bhegi bhegi. Iyi nyowani chigadzirwa dhizaini inopa yakanakisa yepasirese nyika: yakanyanya kurerukirwa uye kugadzikana kweye-pa-kuenda kudya.
IN-HOME & RESTAURANT Plate DZAKATEVEDZANA
MIMWE PULP PRODUCT DZAKATEVEDZANA
Kupisa kusvika Kumusoro-Kupisa Pulp Packaging (FHHP) inokodzera kutonhora kusvika pakupisa kupisa kushanda. Izvo zvinobva mukuvandudza kwedu fomula iyo yatinogona kuona se "KUMBHA KURONGA" kwekudya chikafu. Zvakare, zvinobatsira kudzikisa kurongedza mutengo, kubvisa zvigadzirwa zvekugadzira, kuti uwane kugona kwepamusoro uye nemutengo wakaderera.
Kunyangwe paine mazana emamodeli mukambani medu, isu tichiri kugashira kuburitsa zvinhu zvepurp tafura zvinoenderana neyako dhizaini, saizi uye logo.
Ngatiedzei kuita kuti nyika yedu ive yakasvibira uye iri nani.
Pashure: Wholesale Vatengesi veChina OEM Tsika Inoraswa Logo Yakadhindwa Imwechete Wall Blank Pepa Kofi Makapu 8 Oz
Zvadaro: 100% Yekutanga Fekitori China Bulk Pepa Ningbo Peta Fbb C1s Ivory Board
bagasse chikafu chemidziyo
bagasse hinged keke
bagasse kutenderera kamuri mbiya
bagasse saladhi mbiya
bagasse slop mbiya
bagasse mvura proof proof mudziyo
midziyo chikafu chinoraswa bagasse
kuraswa nzimbe bagasse mahwendefa
Chitupa cheIOS China Tsika Logo Chikafu cheGiredhi Bu ...
2019 China New Design China C1s Coated yenyanga dzenzou Bo ...
High Quality kuti China Single Wall Disposable P ...
Mutengo unonzwisisika China 210GSM 230GSM 250GSM 270 ...
Factory Yakachipa Hot China Ningbo APP Peta Bhodhi / I ...
Factory Yakagadziriswa China Nevia Brand Kaviri Sid ...